Mareykanka Oo Iska Fogeeyay Duqeyn Ka Dhacday Saakow – Somali Broadcasting Service
War qoraal ah oo lagu daabacay barta Taliska AFRICOM ay ku leeyihiin Twitter-ka ayaa lagu sheegay in aysan jiran.
Taliska Mareykanka ee AFRICOM ayaa beeniyay wararka sheegaya in duqeymo dhanka cirka ah diyaaradahooda aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaano Drones-ka ay talaadadii la soo dhaafay ka fuliyeen degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe.
War qoraal ah oo lagu daabacay barta Taliska AFRICOM ay ku leeyihiin Twitter-ka ayaa lagu sheegay in aysan jiran wax duqeymo ah oo diyaarahoodu ay ka fuliyeen Soomaaliya, tan iyo 11-kii bishani Semptember.
Duqeynta oo aheyd mid xoogan ayaa dhacday saqdii dhexe ee habeenimadii talaadada aheyd ayaa waxaa ku geeriyooday illaa 3 Caruur ah, waxaana sidoo kale lagu burburiyay Isbitaal iyo Dugsi Qur’aan, sida lagu daabacay boggaga Al Shabaab.
Sidoo akle dowladda Soomaaliya oo ka hadashay duqeyntaasi ayaa sheegtay in lagu dilay xubno ka tirsanaa Xarakada Al Shabaab, walow DFS aysan cadaynin cida laheyd diyaaradaha fuliyay Duqeymahaasi.
Inta badan Mareykanka ayaa duqeymo xoogan ka fuliya K/ Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ay ku sugan yihiin Xarakada Al Shababaab.
Wararka websiteyada somalidu qoraan ee inta badan beenta u badan, amaba tarjumaad xumadu ku jirto bal nala eega.
ka dib markii aan eegay US AFICOM barta ay Twitterka ku leeyihiin waxaan ugu tegey qoraalkan oo ka gedisan kan afsomaliga lagu tarjumey ee khaldan.
Websitkan Sida khaldan warkan u tarjumey ayaa wuxuu ka mdi yahay kuwa ugu waaweyn war baahinta somalida .
Sixitaankan warka sida khaldan loo tarjumey ayay dib u saxeen bahda SBS Media.
Author adminmasterPosted on September 20, 2018 September 20, 2018 Categories Hot Topics / War Cusub, Maqaalo-Fekerdo, News, Politics, World
Previous Previous post: Maamul Goboleedyada oo ka hadlay go’aankii Hirshabeelle kaga baxday heshiiskii Kismaayo
Next Next post: Guddiga joogtada ah ee Baarlamaanka Puntland oo baaq u diray dowladda Federaalka